Maro ny olona te-hihaona alemana vehivavy. Indrindra izy ireo ny hanana fahatokisana sy ny maha-matihanina. Tsy maintsy miady ho ela ny fotoana noho ny tanjona, ary afaka manao toy izany koa ny asa ho toy ny olona ary toy izany koa ny zon’olombelona. Izy ireo dia efa lehibe mba matoky tena sy matanjaka ny vehivavy. Matetika ianao dia afaka mandre izany zavatra ireo vehivavy ireo fa hentitra, fa ny feon’ny rehetra ireo fiampangana.
Ahoana moa ny toetra amam-panahy, izay afaka mianatra, fantatrao, sy ny fomba ny zavatra andrasana avy amin’ny mpiara-miasa. Ireo sy ny hafa koa Fanontaniana hovaliana ao amin’ny Lahatsoratra manaraka. Ny Tany any amin’ny ivon-toerana ao Eoropa, betsaka ny tolotra ho an’ny mpanao vakansy. Raha ny tanjona dia ny kolontsaina na ny natiora ny mijery na manana Asa eo amin’ny foto-kevitra ny zaridaina, misy zavatra ho an’ny olona rehetra. Izany no endriky toy ny Alpes, Nosy any an-dranomasina, na fotsiny ny be havoana vistas afaka ny ho deraina. Ny Hanasongadinana ny Wadden ranomasina ny ranomasina Avaratra, ary raha toa ka efa misy ihany koa ny islets no antoka. Ao Atsimo ny Hamburg, any alemaina-panjakana ny ambany Saxony, ao amin’ny lüneburg Heath. Tsy afaka ny tsy ho nifindra alalan’ny endriky ny zavatra hita isan-karazany ny zava-maniry, fa izany no lehibe indrindra vorona Park ao amin’ny tontolo Walsrode. Ny Atsinanana ny Hamburg ao amin’ny tsara tarehy Mecklenburg lake distrika. Any Atsimo any Alemaina, ny Bavarian ala maro be havoana ala. Koa ny farihy Constance sy ny Rhin faritra efa tsara tarehy ny endriky. Izay tsy izy tao an-trano, dia tokony tsy hanadino izany, ao amin’ny tanàna lehibe fiara toy ny Berlin, Munich, na Cologne. Izany dia izao tontolo izao-malaza zavatra toy ny Tady vavahady, amin’ny TELE ny tilikambo na ny Cologne Katedraly dia afaka ny ho deraina. Maromaro tapitrisa mpitsidika ondry any Alemaina tamin’ny septambra izao tontolo izao no malaza indrindra, isan-taona hanatrika Oktoberfest. Ny endriky ny anarana ny vehivavy no tena zava-dehibe. Mampiavaka ny alemana, manga maso, blonde volo ary mazava hoditra. Mazava ho azy any Alemaina misy be dia be ny volo samy hafa loko, satria ny volo dia matetika ahitana loko, fa ny blonde dia tena matetika nisolo tena. Alemaina ny vehivavy no tsara tarehy amin’ny tsara ny endriny. Na izany aza, dia tsy zava-dehibe aminao, dia foana ny tena tsara tarehy mba haneho na hametraka ny curves ao an-toerana. Ny isan’andro ny Akanjo dia nitandrina mahalana vao manao Jeans, T-Shirt sy ny fanatanjahan-tena kiraro.
Maro ny zavatra vehivavy, izany dia tsy ampy foana
Anao ny style na izany aza mandeha izy ary ataovy sary ao amin’ny antoko, ohatra, sexy akanjo sy Toy izany koa. Indrindra fa betsaka ny olona te-hihaona alemaina ny vehivavy, noho izy ireo mahatsiaro ho tia anao. Ny zavatra sarotra ny toetra amam-panahy, ohatra, dia, noho izany, fa ankehitriny izy ireo dia tena mahaleotena, ary matetika asa sy ny fianakaviana mandritra izany fotoana izany ny tompo. Teo aloha izy ireo bebe kokoa ny ao amin’ny tranon’ny vadiny, fa niara-niasa noho ny zony. Mba ho afaka daholo ireo karazana fahalalahana ho tia, tsy maintsy miady amin’ny vehivavy ary dia toy izany no tena mahafantatra. Amin’izao fotoana izao, ny vehivavy dia miha amin’ny fitarihana toerana. Alemaina ny vehivavy dia tena mafy ary izany dia tsy maintsy manaiky ny olona, satria ny vehivavy te-ho ekena. Fa misy ihany koa ny fotoana izay alemana vehivavy mahia indray, tia ny filaminana sy ny ampihantaina, ianao te-ho. Alemaina vehivavy ireo koa dia tena saro-pady, ary mahatonga anao ho marefo. Izany no tsy te-hampiseho azy ireo ny olona rehetra. Noho izany, tsy maintsy hitafy ny endrika ivelany isehoan’ny, fa inona izany no tena sarotra ny ny hery ho tombanana araka ny tokony ho izy. Ireto manaraka ireto ny antontan-taratasy dia vavolombelona ny fampakaram-bady, kopia nahaterahana, toeram-ponenana taratasy fanamarinana, ID karatra ho ilaina: raha misy Mpiara-miasa tsy alemana, famantarana ny zom-pirenena, raha iray amin’ny Mpiara-miasa dia efa manambady, ny taratasy fanamarinana ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ny didim-panjakana na ny fahafatesana taratasy fanamarinana, dia tokony hanana ny ankizy, ny Mpiara-miasa, ny Tahirim-bola ny fananana eo ambanin’ny ankoatra sangan asa. Alemaina ny vehivavy te-ho romanced ary te-hihaino, inona no mety indrindra ho anao.
Na izany aza, ny anarana dia tsy weakling
Tsy maintsy ho ny Volamena afovoany. Alemà te-hanana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiainan’ny Mpiara-miasa. Tany am-boalohany indrindra moa ve ianao manana drafitra ho an’ny hoavy. Ny olona dia tokony ho afaka amin’ny handamina izany, satria ianao dia nandresy lahatra. Tsy midika akory izany, na izany aza, fa tsy ny marimaritra iraisana. Ny zava-Dehibe indrindra dia ny hoe ny Mpiara-miasa, nitondra izany ho toy izany. Alemaina ny vehivavy dia afaka manao ny tsara sy ny Mpiara-miasa izay mankasitraka anao sarobidy be dia be amin’ny traikefa nahafinaritra, ary mora. Raha toa ianao ka efa zatra Namanao sy ny tia azy, dia izy no sambatra ho azy sy ho azy hanamafy orina indray ny, foana. Indrindra fa ny anarana ny vadiny fitiavana, tsy Mivadika, Hatsikana, ny fianakaviana sy ny fironana sy ny faharanitan-tsaina te. Alemaina vehivavy tia indraindray havela ho malemy sy ny Mpiara-miasa nikarakara. Saro-pady io lafiny mampiseho ny any ivelany fa tsy fahita firy, inona ny olona no mba zatra. Tsy ny asa mafy indrindra mba handresy ny fon’ny alemana vehivavy. Ambonin’ny zavatra rehetra, dia mahatsapa izy ireo fa ny marina, marina sy ny tena mampamangy fa malefaka. Ny vehivavy dia tsy te-haheno ihany no tsara ny teny momba ny endrika ivelany, indrindra fa ny momba ny toetra amam-panahy. Alemaina vehivavy toerana ambony be vidy, toy ny tsara-groomed Tarehiny sy ny fahalalam-pomba. Ankoatra izany, ny olona dia tokony ho afaka hiresaka hitarika sy hanao zavatra amim-pahatokiana. Tsara toerana ny Hahafantatra ny Barany, ny toeram-pandihizana amin’ny alina na eny amin’ny toeram-bahoaka. Amin’ny fantsom-Baovao Sosialy na an-Tserasera Mampiaraka toerana ny mety ho tsara kokoa hatrany mba hahazo ny zavatra vehivavy. Ny tena fomba mahomby mba hianatra tsara tarehy alemana zazavavy, ary manolotra ny matchmaking. Sary: vehivavy Tanora ao amin’ny Dirndl, Kristianina Schwier, Tanora tsara Tarehy Manifesto, ny tsara Tarehy blonde amin’ny teboka manan-danja indrindra ao amin’ny lahatsoratra manontolo: ny olona dia tokony ho afaka hitarika ny resaka sy ny fihetsika matoky. Ny olona dia tsy maintsy mitarika ny resaka sy ny fara-fahakeliny mody toy ny hoe izy no mahafantatra izany
← Online velona amin'ny chat
Hiresaka kisendrasendra: maimaim-Poana Kisendrasendra ny Lahatsary amin'ny Chat Fampiharana →